Guardiola vs Wenger – Ayaa Guulo Badan Labadaan Macalin Ka Hor Kulanka Emirtes Stadium Iyo Faah-faahinta Dhamaan Kulamadii Ay Wada Ciyaareen. | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Guardiola vs Wenger – Ayaa Guulo Badan Labadaan Macalin Ka Hor Kulanka Emirtes Stadium Iyo Faah-faahinta Dhamaan Kulamadii Ay Wada Ciyaareen.
Guardiola vs Wenger – Ayaa Guulo Badan Labadaan Macalin Ka Hor Kulanka Emirtes Stadium Iyo Faah-faahinta Dhamaan Kulamadii Ay Wada Ciyaareen.	Waxaa Qoray: Abdirashid Mohamud Nor "SHarDinHO" Taariikh: 2-April-2017
Pep Guardiola iyo Arsene Wenger ayaa markii labaad isaga hor imaan doona kulamada horyaalka Ingiriiska, inkastoo ay dhawr jeer is wajaheen hadana marka la yimaado tartamada England sidaas isuguma fogaan waana ciyaartoodii labaad kadib kulankoodii Etihad Stadium.
Macalinka reer Spain ayaa guulo badan madama uu Wenger wajahay waqtigiisii Barcelona sidoo kalana waxey tiro la mid ah tiradii ay Barca isku wajaheen isaga hor yimaadeen Bayern dhamaan kulamada ay is wajaheen waxey ahaayeen koobka horyaalada yurub ee Champions League haan iloobin iney kulan ka tirsan Premier League is wajaheen sanadkii dhamaaday.
Wenger ayaa garaacay laba jeer Guardiola isagoo kala hogaaminaya Barca, Bayern & Man City, balse wuxuu ku guuldareystay inuu waligiis isagoo marti ah kasoo badiyo madama labada jeer ee uu garaacay uu kaga badiyay Emirates Stadium.
Wenger iyo Guardiola ayaa markii ugu horeysay ku kulmay waqooyiga magaalada London markaas oo ay isaga hor yimaadeen Quater Finalka tartanka Champions League-ga xili ciyaareedkii 2009/2010. Gunners ayaa u muuqatay koox dhimatay madama uu 13-daqiiqo gudahood Zlatan Ibrahimovic laba gool uga dhaliyay, balse Walcott oo badal kusoo galay iyo Fabregas oo dhamaadkii ciyaarta dhaliyay rigoore ayaa dhibic qura siisay Wenger iyadoo ay xusid mudan in kulankaas uu soo dhaweyn heer sare ah ka helay Henry jamaahiirta Arsenal.
Gunners oo ay hareeyeen dhaawacyo ayey la kulantay bishii April, lugta labaad ee Quater Finalka markaas oo labada kooxood ay isku qaabileen Camp Nou. Nicklas Bendtner ayaa si layaab leh Gunners hogaanka ugu dhiibay balse wixii markaas ka dambeeyay Messi ayaa qabsaday guud ahaan garoonka madama uu afar gool ka dhaliyay Arsenal.
“Marka aad wajaheyso ciyaariyahan sida Messi oo kale ah waxaa qasab ah inaad qalad badan sameyso” ayuu yiri Wenger kadib ciyaarta, “Waa ciyaariyahanka ugu fiican dunida”
Wareega 16-ka ayey Arsenal wajahday Barcelona iyadoo xasuusata in xili ciyaareedkii hore lagu soo reebay Quater Finalka, balse Gunners waxey muujisay awood dheeraad ah madama ay Guardiola iyo wiilashiisa oo cirka marayay waqtigaas ku dubteen Emirates Stadium.
David Villa ayaa daah furay goolasha kulanka, balse Robin Van Persie ayaa kansalay goolkaas inkastoo kubad rogaal celis ah oo aad u qurux badneed ay Arsenal ku heleen gool, Samir Nasri ayaana caawiyay Andrey Arshavin kaas oo ka farxiyay Jamaahiirta Gunners.
Wilshere ayaana soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh madama uu kasoo dhalaalay agagaarka Xavi iyo Iniesta oo ku jiray maalmahoodi ugu fiicnaa.
Arsenal ayaa dhibaato kale kala kulantay Barcelona iyadoo joogta Camp Nou inkastoo kulankaas uu garsoorka eeda ku lahaa guuldarada Gunners.
Lionel Messi ayaa bilaabay bandhigga goolasha Barcelona inkastoo Sergio Busquets uu iska dhaliyay gool taasoo rajo fiican siisay Arsenal balse Robin Van Persie ayaa si layaab leh looga saaray garoonka waxaana u raacay in Xavi iyo Messi ay laba gool dhaliyaan.
Kadib waayahii Barcelona mar kale ayey wareega 16-ka isku qabteen Pep iyo Wenger, inkastoo Gunners ay bandhig ilqabad leh soo bandhigtay hadana waxaa niyad jabiyay in Mesut Ozil laga qabtay rigoore. Wojciech Szczesny ayaa laga saaray ciyaarta kadib markii uu qalad ku galay Robben, waxaana laba gool Bayern siiyay Kroos iyo Muller.
Lugtii labaad ayey isku yimaadeen Arsenal waxey mar kale sameysay bandh fiican balse wey isaga hartay tartanka madama ay barbaro 1-1 ah gashay. Bastian Schweinsteiger ayaa bilaabay bandhigga goolasha Bayern, balse Lukasz Podolski ayaa ka beeniyay.
Arsenal 2-0 Bayern Munich (Champions’ League group stage, October 2015)
Waxey wada galeen hal group xili ciyaareedkii xigay, Bayern Munich ayaa bandhigii ugu fiicnaa ciyaarta soo bandhigtay madama ay 73% heleen kubad heysashada balse waxey aqbaleen guuldaro kaga timaada Gunners. Petr Cech ayaa sameeyay badbaadino aan caadi aheen waxaana labada gool ee Gunners qeybahii dambe dhaliyay Olivier Giroud iyo Mesut Ozil.
Bayern Munich 5-1 Arsenal (Champions’ League group stage, November 2015)
Guardiola iyo wiilashiisa ayaa ku aargutay Allianz Arena oo isbuucyo kadib la isugu tagay si fiican ayeyna u guuleysteen madama ay nus darsan ku dhawaad ku garaaceen Gunners. Bayern ayaa qeybtii hore ciyaarta 3-0 ku marisay Gunners Robert Lewandowski, Muller iyo David Alaba ayeyna goolasheeda kaga mahad celineysaa. Robben ayaa ku daray goolka afaraad ka hor inta uusan Giroud soo celin goolka calanka, waxaana goolka shanaad ugu daray Muller.
Markii ugu horeysay ayey isaga hor yimaadeen labadaan macalin kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ka naxsaday Walcott daqiiqadahii ugu horeeyay, balse Raheem Sterling iyo Leroy Sane ayaa jawaabo kulul ka bixiyay taasoo guul siisay macalinka reer Spain.
Waxey aheyd guushii ugu horeysay oo uu Pep ku gaaro gurigiisa kulamada horyaalka tan iyo 17-kii September, Pep iyo wiilashiisa hadda waxey leeyahiin 57-dhibcood iyagoo fadhiya booska 4-aad ee horyaalka.
Ugu dambeyntiina Pep Guardiola ayaa dhigiisa Wenger garaacay 5-jeer, halka uu guuldaro kala kulmay 2-jeer, waxeyna isku garab dhaceen 2-jeer oo qura taasoo ka dhigan in Pep uu garaacay Wenger maalmahoodii hore.